Fembera bhuku randiri kuverenga kubva mundima idzi | Zvazvino Zvinyorwa
Fembera bhuku randiri kuverenga kuburikidza nezvikamu izvi
Yange iri nguva yakareba kubvira pandakakuunzira imwe yezvinyorwa izvo dingindira racho nderimwe remadiro ako: mitambo yekunyora. Pane ino nguva, chinyorwa chandinopa kwauri nhasi chiri pamusoro fembera bhuku randiri kuverenga panguva ino kuburikidza nhevedzano yezvikamu zvandichakuisa pano. Hapana chimwe chinopfuura icho. Kana munyori kana runyorwa rwekunyora kwarwuri hakuzoiswa, uyezve hazvizove zvakakosha kutsvaga mhinduro paGoogle. Ngativei vakatendeseka pachedu!
Kana iwe uchida uye kuti iite kuti ive inowirirana, iwe unogona kuita zvakafanana nebhuku iro iro riri kukuperekedza parizvino. Rangarira kuti iwe une chikamu chemashoko chayo. Ngatitambei? Tevere, ndinokusiira dzimwe ndima dzeiri bhuku rinoshamisa randinaro izvozvi mumaoko angu.
1 Zvikamu kubva mubhuku
1.1 Chikamu 1
1.2 Chikamu 2
1.3 Chikamu 3
Zvikamu kubva mubhuku
Zvisikwa zvemusango zvinotakura pamwe nazvo zviputu zvekuporesa; inotakura zvese zvinoda kuve mukadzi uye kuziva. Inotakura mushonga wezvinhu zvese. Inotakura nyaya uye zviroto, mazwi, nziyo, zviratidzo uye zviratidzo. Ndiyo mota uye kwairi kuenda.
Nyaya mishonga. Ndakafadzwa navo kubva pandakanzwa yekutanga. Vane simba rinoshamisa; havadi kuti tiite, kuve kana kuita chimwe chinhu mukushandisa: isu tinongofanira kuteerera. Idzo nyaya dzine mishonga yekugadzirisa kana kupora chero yakarasika dhiraivha. Idzo nyaya dzinounza manzwiro, kusuwa, mibvunzo, zvishuwo uye njere dzinongoerekana dzaunza kumusoro kune archetype, mune ino kesi, Mukadzi Wesango.
Chii chinofa? Iko kunyepedzera, zvinotarisirwa, chishuwo chekuve nezvose, kungoda izvo chete zvakanaka, zvese zvinofa. Sezvo rudo rwunogara rwunotungamira mukuburuka muchimiro cheRufu, zvinonzwisiswa kuti nei kuzvidzora kwakanyanya uye nesimba rakawanda remweya zvichikosha kuti uzviite mukuzvipira uku.
Unoziva here kuti ibhuku ripi? Ndepapi pandima pawakawana zita randiri kutaura nezvaro? Kana iwe uchida kutora chikamu, isa zvimwe zvikamu kubva mubhuku rauri kuverenga izvozvi muchikamu chedu chemashoko uye isu tese titambe. Zvichava zvinonakidza!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Fembera bhuku randiri kuverenga kuburikidza nezvikamu izvi
Zvingave "Vakadzi vanomhanya nemapere." Shuwiro yakanaka
Pindura kuna Ayesha
Rachel Gonzalez akadaro
Vakadzi vanomhanya nemapere.
Ini ndakaburitsa mumufananidzo uye mundima yekutanga.
Pindura Raquel González
Abby Espinoza akadaro
vakadzi vanomhanya nemapere ... ndinoida.
Pindura Aby Espinoza
Laura Chivabvu akadaro
Ini ndinofunga mutambo wekufungidzira ipfungwa yakanakisa hahaha
Pindura kuna Laura Mayo
Ray Ramon akadaro
Handigone kufungidzira kuti ndeapi mabhuku, asi iwo akaipa uye asingatsungiririki.
Pindura kuna Ray Ramón
Gabriela vega akadaro
Vakadzi vanomhanya nemapere naClarissa Pinkola !!
Pindura Gabriela Vega
Vakadzi vanomhanya nemapere, ndiri kuverenga izvozvi chaizvo
Pindura kuna Lynn W.
Edzimba dzakakosha dzenhau pfupi neHama Grimm naHans Christian Andersen
Ive makore makumi maviri nemashanu here kubva paaya manhamba manomwe? Ndizvozvo. Uye tinoaverenga here kana kuti kwete?